RASMI: PSG Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Heshiiska Gianluigi Donnarumma - Laacib
HomePSGRASMI: PSG Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Heshiiska Gianluigi Donnarumma
RASMI: PSG Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Heshiiska Gianluigi Donnarumma
July 14, 2021 Abdiwahab Ahmed PSG, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxeexa goolhayaha Talyaaniga ee Gianluigi Donnarumma oo ay hore ula sii gaadhay heshiis.
Goolhayaha xulka Talyaaniga ayaa bishii hore ka tegay AC Milan oo uu ka dhamaaday heshiiskiisii, waxaanu 22 jirkani si xor ah ugu biiray kooxda reer France oo uu qalinka ugu duugay heshiis shan sannadood ah.
Laacibkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo kooxda weyn ee PSG, diyaarna uu u yahay loollan iyo inuu sii wado kortaan ciyaareed.
Shabakadda PSG ayuu waraysi siiyey, waxaanu yidhi: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxda weyn ee Paris Saint-Germain. Waxa aan dareemayaa inaan diyaar u ahay tartan iyo in aan sii wado koritaankayga. Waxa aan doonayaa in aan PSG la gaadho guulaha ugu badan ee suurtogal ah, taageereyaashan siiyo farxad.”
Madaxweynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi oo isaguna ka hadlay madashii uu laacibkani ku saxeexay heshiiska ayaa yidhi: “Waxa aanu aad ugu faraxsanahay in aanu Gianluigi Donnarumma kusoo dhoweyno Paris Saint-Germain.
“Waxa aanu ugu hambalyeynaynaa guushii Euro 2020 iyo abaal-marintiisii ciyaartoygii ugu wanaagsanaa tartanka. Waxa aan ogahay in Gianluigi uu soo dhoweyn diirran ka heli doono qof kasta oo kooxda ah oo ay ku jiraan ciyaartoyda kooxdiisa, shaqaalaha iyo dhamaan taageereyaasha reer Paris.”
Donnarumma ayaa isagoo da’yarta AC Milan ku jira u saftay kooxda koowaad isagoo 15 jir ah, sannadkii xigay markii ay da’diisu noqotay 16 jirna waxa si rasmi ah u noqday goolhayaha koowaad, isagoo dhigay rikoodho layaab lahaa xilli aanu xataa gaadhin da’da qaangaadhka ay reer Yurub u yaqaanaan.
Intii uu joogay AC Milan waxa uu u saftay 251 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah, waxaanu ka tegay dhamaadka bishii June isaga oo 22 jir ah.
Xulka qaranka Talyaaniga ayuu ciyaaartiisii u horreysay u saftay isaga oo 17 jir ah, waxaanu illaa hadda ciyaaray 33 kulan, qaybta u weyna waxa uu ka qaatay guushii Euro 2020 oo uu rikoodheyaal kusoo saaray kulamadii u dambeeyey.